Yesaia 27 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
27 Saa da no, Yehowa+ de ne nkrante+ kɛse dennen no bɛba Lewiatan,+ ɔwɔ a ne ho yɛ hare,+ no so. Ɔde bɛba Lewiatan, ɔwɔ a ne mu apompono, no so. Na obekum po mu asuboa+ kɛse no. 2 Ɛda no monto dwom mma no+ sɛ: “Bobeturo+ a emu nsã puw ahuru! 3 Me Yehowa, me na mehwɛ no.+ Megugu no so nsu+ bere nyinaa. Mɛhwɛ no awia ne anadwo+ na obi ansɛe no. 4 Abufuw biara nni me mu.+ Hena na ɔde nsɔe+ ne nkyɛkyerɛ bɛba m’anim wɔ ɔko mu? Anka metiatia so de ogya atom prɛko.+ 5 Anyɛ saa a, ɔmmra m’abannennen mu ne me mmɛka asomdwoesɛm; asomdwoesɛm na ɔne me mmɛka.”+ 6 Nna bi bɛba a Yakob begye ntini, Israel+ bɛfefɛw agu nhwiren, na wɔde nnɔbae bɛhyɛ asase no so mã.+ 7 Wɔnhwe no sɛnea ne hwefo hwee no no? Anaa wonkum no sɛnea wokum ne nkurɔfo no?+ 8 Na wobɛteɛm ne no adi asi na woaka no akɔ. Obehuw mframa dennen apia no akɔ, da a apuei mframa bɛbɔ no.+ 9 Enti eyi so na wɔnam bɛpata Yakob bɔne,+ na sɛ oyi ne bɔne+ kɔ a, aba a ebefi mu aba nyinaa ni: Ɔbɛma afɔremuka abo abɛyɛ sɛ akado a wɔayam, na abosonnua+ ne aduhuam ade remma wɔn ho so bio.+ 10 Na kurow dennen no bɛda mpan. Wɔbɛma mmoa adidibea ada ntuw na wɔagyaw ato hɔ sɛ sare pradada.+ Ɛhɔ na nantwi ba bedidi, na obebutuw hɔ awe ne mmãã.+ 11 Sɛ ne nnubaa no wo a, mmea bebubu mmobaa no akɔsɔ gya.+ Wɔyɛ ɔman a wɔn adwenem nnɔ.+ Ɛno nti wɔn Yɛfo no yam renhyehye no mma wɔn, na wɔn Nwemfo no renhu wɔn mmɔbɔ.+ 12 Saa da no, Yehowa bɛporow aba+ no afi asubɔnten kɛse+ no ano akosi Egypt+ subon ano; na saa na mo Israelfo nso, wɔbɛtase mo mmiako mmiako.+ 13 Ɛda no wɔbɛhyɛn abɛn+ kɛse bi, na wɔn a wɔayera wɔ Asiria+ asase so ne wɔn a wɔabɔ wɔn apansam Egypt+ asase so no bɛba abɛkotow+ Yehowa wɔ bepɔw kronkron no so wɔ Yerusalem.+